प्रधानन्यायाधीश र बार अध्यक्षबीच मञ्चमै जुहारी ! कानूनमन्त्रीको यस्तो छ धम्की – YesKathmandu.com
प्रधानन्यायाधीश र बार अध्यक्षबीच मञ्चमै जुहारी ! कानूनमन्त्रीको यस्तो छ धम्की
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायपरिषदको अधिकारमा बारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै केसीको आलोचना गरे । उनले केसीको आलोचना मात्र गरेनन् प्रधानन्यायाधीश राणालाई धम्कि समेत दिए । ‘मेरो पार्टीले यसअघि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका ब्यक्तिका विपक्षमा भोट हालेको थियो’, ढकालले भने ‘पक्षमा र विपक्षमा भोट हाल्ने काम सकिएको छैन । चार बर्षको समयमा त्यो दिन जतिबेला पनि आउन सक्छ ।’